Kpido: atụmatụ atụmatụ | Martech Zone
Kpido: atụmatụ atụmatụ
Ndị ụlọ ọrụ na-eji oge buru ibu na-ahụ ma ọ bụrụ na ha dị ogo na ọchụchọ na ịmepụta ọdịnaya na saịtị dị ịtụnanya na-eme mgbanwe. Mana usoro dị mkpa a na-aghakarị bụ otu ha nwere ike isi bulie nbanye ha na peeji nke nsonaazụ ọchụchọ engine. Ma ị na-ogo ma ọ bụ na ọ bụghị naanị ihe dị mkpa ma ọ bụrụ na a manye onye ọrụ ọchụchọ ka ọ pịa. Ezie na a nnukwu aha, meta nkọwa, na permalink nwere ike melite ndị Ohere… na-agbakwunye ọgaranya snippets gị na saịtị
O ruola afọ asatọ kemgbe m kpaliri ndị ahịa m itinye snippets bara ụba na ụlọ ahịa ha n'ịntanetị, weebụsaịtị, na blọọgụ ha. Nsonaazụ nchọta ihe nchọta Google abanyego ndụ, iku ume, ike, peeji nke ahaziri ka ịchọrọ ịchọta ozi ịchọrọ… n'ụzọ dị ukwuu site na mmụba anya ha mere na peeji nsonaazụ ọchụchọ ahụ site na iji data ahaziri nke ndị mbipụta nyere. Nkwalite ndị ahụ gụnyere: Igbe Azịza Kachasị ọsọ, azịza ozugbo, ndepụta, carousels, ma ọ bụ tebụl ndị ahụ